MAXAAD KA TAQAAN DHAQANKA SWEDESHKA IYO KAN SOMALIDA.pilot
Waxaan jecelahay inaan idin soo hor dhiga labada dhaqan ee somalida iyo kan sweden, Hadaba sheekadaan idinku soo maqan waxaay dhex martay laba hablood oo uu kale dhashay labadaan dal ee kor ku xusan, Runtiina sheekadaan waxaay dhex mareysaa labada hablood ee magacooda la kale yiraado shukri muuse iyo monica oo iyada reer swden ah,Sheekadana waxaa bilabaya monica.
Waxaan mudo aan ka yareyn 7 sano saaxib la ahay gabar soomaliyeed oo aannu isku baranay jamacadii aan dhiganayay 2001, Aad iyo aad baan isku dhex galnay oo noqonay saaxibo wanaagsan
ilaa iyo markaanna aannu saxibo nahay, Waxaan saaxibtay ka doodi jirnay waxyaabo badan oo aan ku arko dhaqankeeda iyo waxa ay ku aragto dhaqankeyga. Maalintii ugu horeysay waxaay ka bilaabatay dooda-yada, Habeen inagoo jooga guri-geeda oo aannu daawanayno filim ameerikaan ah
ayay aragtay haweenta xidigta ka ahayd filimka oo inta ka soo kacday hurdo oo weli ku dulhuruda sariirteeda uu ninkeeda ugu dulkeenay quraacdii, Markaas ayay tiri, WAXAAN LA YAABANAHAY MAXAAY UU KACI WEYDAY OO UU SOO CADAYSAN WAYDAY?!!! Waxaan ku iri anigaba subuxii anigoon cadayan ayaan cunaa cunadda, Waa ay ila yaabtay oo ii weydiisay sababta aanan uu cadayan waxaan ugu jawaabay, Waxaan cadaydaa habeenkii intaan seexan, Subixii markaan soo kacana waxaa igu horeeya oo aan cunno waa quraacdayda oo weli waa nadiif ilkahayga, Waxaay ii tiri,INTAAD HURIDAY SOW ISKUMADAAN HAYSAN AFKA AMA KALA HAYN WAANA MUDO 8 SACADOOD AH AMA KA YAR MARKA WAXAAN UU ARKAA IN WAX UR AH KU DHALAN KARAAN AFKAAGA INTAAS SAAS AHAA. Waxaan saaxibtay ugu jawaabay intaan hurdo waxna cunimayn waxna cabimayn ee waan hurday. Sheekadii filimka oo inoo socotay waxaa naga qasay arintaas ku saabsan cadayga, Mudo ka dib ayaan ogaaday in dadka soomaliyeed badankoodu cadaysan marka ay seexanayaan, Taasna ay uu keento inay subaxii markay soo kacaan cadaysadaan, Halka aan anagu ka cadayano habeenkii maraan seexanayno, Ka dib ayaan hadana ka wada doodnay saaxibtay in ay wanaagsan tahay in la cadaydo labada goorba habeenkii marka la seexanayo iyo subaxii marka hurdada laga soo kaco, Taas baana ku gaarnay go,aan labadayaduba.
Waxaaan kaloo la yaabay saaxibtay waa qof jecel inay is qurxiso oo qaadato dharka ugu wanaagsan
magaaladda ama hadba moodadii socota markaa, Waa qof markaad dusha ka arkayso ku qabanayso ma liqdaa quruxdeeda iyo habka dhar xirashadeedaba, Waxaana taas mid la mid ah ku arkay dumarka soomaliyeed dhamaantood ha la qabo ama yaan la qabine. Waa dad jecel inay oogadooda si wanaagsan uu nadiifiyaan kuna shubaan wax udgooon, Waxaan halkaas ku jeclaaday nadaafada wanaagsan ee ay ii bartay saaxibtay iina sheegtay in diinta muslimka dhigayso in lays nadiifiyo.
Waxaa aad iyo aad iga yaabisay sida aysan uu daryeelaynin dumarka iyo ragga soomaliyeed nadaafada guryahooda, Waxaan ogaaday inay ku caayaan dadka swedishka inaysan nadiifin oogadooda, Laakiinse ay la yaabaan habka wanaagsan ee ay uu nadiifiyaan guryahooda, Waxaan tagay guryo badan oo ka mid ah xitaa guriga saaxibtay, Waxaan ka wiswisaa inaan ku cabo koobabkooda markaan arko sida ay uu egtahay jikadooda ama musqushooda waxaan halkaan ku sharxi karin ayaan ku arkay guryaha qaarkood, Waxaanse jecelahay inaan uu sharxo inay guryaha wanaagsan yahay in guryaha loo furo hawada subax walbo marka hurdada laga soo kaco,
Waxaan ku arkay guryaha qaarkood in dadka deggan waligood taaban daaqadahooda dhiqin ama furin oo layrin guriga, Daaqadahaa waxaay ka soo sokomariyeeen daah weyn oo aan uu malaynayo inuu aad qaali u yahay oo dhana loo kaxayn karin, Habeen iyo maalin guriga waa mugdi muraayadaha daaqada waa wasaq meesha ay iska qabsadaan muraayada iyo alwaaxa haya waxaa ka buuxa habaas iyo madow ay uu keentay furid la,aan. Waxxaan u arkaaa in hadii aad jeceshahay inaad is nadiifiso aad nadiifiska ka bilowdaa meesha aad ku nooshahay(guriga) Dadka martida kuu ahna kaaga dayan karaan(aniga) Hadii kalese nadiifkii aad ii sharxi lahayd ama aad oranaysid diindayadaa ii faraysa inaan is nadiifiyo meeday?? Ma diintadaa ku tiri: Oogadaada oo kaliya nadiifi uu malaynmaayo taa.. Hablahiina soomaliyeed idinkoo aan iga xumaan nadiifiya guryahiina waana jecelahay in dadka swedishka ah nadiifiyaan jirkooda sida aad uu nadiifisaan jirkiina, Laakiinse ku dara gurigiina, Hanna iga xumaanina inaan dhaqankiina faragali-yey ama aan idiin tusay sidda dadka kale idiin arkaan ama idiin fahmeen.. Aqristoow sheekadaan waxaa i soo gaarsiiyay shukri muuse oo iayada ciyaaraha kabeebayda ku wanagsanaan jirtay iyo qaalamarogadka ee waxaan leeyahay idinkana daahyadiina bal fura ee dhamaantiinba nabadeey...